कोरोना बीमा ७ दिनभित्रै भुक्तानी गर्न सरकारको निर्देशन - गोकर्णेश्वर खबर
गोकर्णेश्वर खबर१९ कार्तिक २०७७, बुधबार ०६:४० मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) ४३ पाठक संख्या
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबीमा ढिलाइ भएपछि सरकारले ७ दिनभित्रै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार नै रहेर ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिन सरकारले निर्देशन दिएको हो ।
रकमका आधारमा रू. १ अर्ब २८ करोड बराबरको दाबी परेको छ । तर, कम्पनीहरूले अहिलेसम्म रू. १३ करोड ७२ लाख मात्र भुक्तानी दिएका छन् । यसरी दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएपछि सरकारले दाबी भुक्तानी समयमै गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पनि अब बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिने विश्वास व्यक्त गरे । हालसम्म १७ लाख ७० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले यस्तो बीमा गरेका छन् ।
रू. १ अर्बसम्मको दाबी पर्दा बीमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढीको दाबी परेमा बीमा समिति, कम्पनीको महाविपत्ति कोष र सरकारमार्फत गरिने व्यवस्था छ । अब सोही व्यवस्था अनुसार नै दाबी भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।
दाबीमा ढिलाइ हुँदा पछिल्लो समय कोरोना बीमा पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ । अब दाबी भुक्तानी समयमै भए त्यो विवाद पनि अन्त्य हुने समितिको विश्वास छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण शुरू हुन थालेपछि बीमा समितिले गत वैशाखदेखि लघुबीमा अन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसबाट हुने व्यवसाय र दायित्व सबै कम्पनीलाई तोकिएको मात्रामा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ ।
पहिलो यस बीमाको बीमांक रू. ५० हजार र रू. १ लाख रहेको थियो । तर गत भदौ २९ देखि बीमांकको सीमा हटाएर संक्रमित हुने बीमितले रू. २५ हजार पाउने व्यवस्था छ । यस्तै संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भएमा बीमितले बिलको आधारमा रू. ७५ हजारसम्म भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भदौ २९ गते अगाडिका बीमितले भने संक्रमण भएपछि बीमांक बराबरको रकम नै भुक्तानी पाउँछन् ।